DegDeg: Taliyayaasha Ciidamadda Qaranka iyo Booliska oo Baaq u Diray Shacabka Somaliland - Wargane News
Home Somali News DegDeg: Taliyayaasha Ciidamadda Qaranka iyo Booliska oo Baaq u Diray Shacabka Somaliland
DegDeg: Taliyayaasha Ciidamadda Qaranka iyo Booliska oo Baaq u Diray Shacabka Somaliland
Taliyayaasha Ciidamadda Qaranka iyo Booliska oo si wada jir ah Baaq u Diray Shacabka Somaliland.
Taliyaha Ciidamadda Qaranka Somaliland Sareeye Gaas Nuux Taani ayaa Shacabka Somaliland ugu baaqay in aan laga hor dhicin Natiijadda Komishanka Qaranka, Isla markaa waxa uu ku daray in ay ciidamadda Somaliland Talaabo Sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan cidii Rabasha ka dhigta Somaliland.
Taliyihu waxa uu sheegay in uu Dhalinyaraddu ka joojiyaan rabashadaha ay ka dhigeen Magaalooyinka Hargeisa, Burco iyo Ceerigaabo.
Waxa isna Halkaas ka Hadalay Taliya Ciidanka Booliska Somaliland Sareeye Guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa ugu baaqay Shacabka in ay ilaaliyaan Amaanka oo ah waxa ay somaliland ku faanto.
Taliye Fadal waxa uu intaa ku daray in Ciidamadda Somaliland ay u dabranyihiin ilaalinta Amaanka iyo nabadgalyadda Shacabka Somaliland, Waxaana uu u sheegay axsaabta qaranka iyo taageerayaashoodaba in aan la iska hor keenin Ciidamadda iyo Shacabka.
Sareeye Guuto fadal ayaa raaciyey in Sharcigu ka Sareeeyo Wax kasta Cidii Falal amni daro iyadoo wadda lagu qabtana Sharciga ayaa la marin doonaa.